Emphilweni wonke umuntu kuyenzeka izinsuku eziningi lokuqala, futhi phambi kwabo bonke, ngandlela-thile, ngokungazi ukhathazekile ngoba akukho isiqiniseko ngokuthi ngabe uyokwazi yini wena uthanda umngane wakhe. Yiqiniso, abesifazane ngonanzelelo ngokubukeka kwabo, kodwa ngaphambi kosuku lokuqala ngisho nabanye abantu abazibheka esandleni futhi wasikisela ukuthi kungcono ukugqoka nokuthi uluhlobo luni amakha ukukhetha. Sisebenza alikhulumi labo losers abaya izifundo Pick-up bese ucabanga ukuthi maningi kakhulu amantombazane zataschat embhedeni, kungekho mzamo, ngakho bathatha ezipholile. Ngaphezu kwalokho, lezi guys musa acabangele yokuthi amantombazane abazona iziwula, futhi kalula "abale" bese efakwa indawo.
Sikhuluma labo abantu abasha abafisa ukuba nobuhlobo obungathi sina nobuhlala njalo lowo othanda intombazane. Ngakho khumbula: uma wamcela bekhwela isivumelwano ke usuvele nesithakazelo kuye, ukuze emhlanganweni, zama ukuba yena hhayi ikakhulukazi eziyinkimbinkimbi. Ungakwazi Yiqiniso, ukucabanga kusengaphambili ukuthi kufanele uthini kowesifazane emhlanganweni, kodwa ungakhohlwa mayelana iletha, Ukungaqiniseki. Yiqiniso, akudingeki ukuba sixoxe ngayo wangaphambili yakho noma ukumcela ukuthi mangaki amadoda kwadingeka baye. Okwamanje, nawe mtshele cha, futhi akumele obakhathalelayo ke. Ngaphandle kwalokho, uma ufuna ngempela ukuba nale ntombazane, ungaceli wakhe lowo mbuzo azishintshi ngoba esikhathini esidlule namanje ngeke isebenze, futhi ubudlelwano ingawohloka.
Uma ungazi ukuthi kufanele uthini kowesifazane uma behlangana naye kangcono, zama ukubuza kuye ngalokho unesithakazelo kulokho unesithakazelo. Uma enendawo wokuzilibazisa ozithandayo, wakujabulela ngikuxoxele, futhi kukhona izwi nezwi ... Yena othanda into intombazane ezithakazelisayo ngempela akucele ukuba usitshele unesithakazelo, ngoba ezithakazelisayo. Mhlawumbe enizithandayo nabo bayothola ukunkenketha engqondweni yakhe, futhi ngokuzenzakalelayo kuyoba of interest jikelele.
Uma usuthole nokuthile ongaxoxa ngakho nentombazane, zama ngangokunokwenzeka ukubheka ngokuvamile. Yenamani nobudlelwano, mtshele ukuthi yini yena cool ngempela, futhi uwena nje bemesaba wakhe. "Abafana" Abaningi Forum incoma ukuthi ngokuvamile uthinte intombazane (i ihlombe uthinte, ukusingatha kanye nokunye okufana nalokho), ayethi uzokwenza ngazo zonke kwabesifazane ziyahlanya othandweni. Ningakholwa! Akekho umuntu othanda ukuba omunye umuntu ahlaselayo yakhe esikhaleni somuntu siqu. Owesifazane - futhi indoda, futhi manje - isihambi. Ilokhu omthintayo, okuthiwa ngengozi, wena nje okwesabisa yakhe kude, futhi liyoshiswa abaleke kuwe ngokushesha kunokuba ucabanga. Uma efuna, wabe kuzokusa ngesandla (futhi intombazane abafundile kakhudlwana futhi ezobuza ukuthi wayengayithola ungakwenza).
Yini ongayisho ukuze intombazane okwamanje? Yebo, noma yini. Mthathe ibhayisikobho futhi nixoxe ifilimu, khuluma ngezinto umculo, mayelana abaculi abawuthandayo. Abesifazane abaningi namuhla akazishalazeli ezemidlalo, kuhlanganise football. Kwazi bani, mhlawumbe umngane wakho - omunye wabo, ngakho-ke ungesabi ukucela ngokwakho ngako. Kodwa musa umbuze imibuzo siqu kakhulu, futhi uqale izingxoxo ngocansi, imali (ngaphandle akusiyo kukhulunywa okokuqala wabo).
Namanje asilwazi yini ukukhuluma mayelana nentombazane? Ungakwazi bajabule ngaye ngokuxoxa izindaba ezihlekisayo ezimbalwa ekuphileni kwakhe. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi unabo okuthize ukuze wabelane bejabule futhi behleka muhle kakhulu aqede wonke umuntu akhululeke. Mtshele a izincomo ezimbalwa, kodwa musa akhohlisa. Ikulumo yenu ayibe ngobuqotho, amantombazane siyijabulele. Lapho bazwakalisa izifiso zokukhanuka futhi ezicashe ukuncoma, abazizwa mncane kakhulu, futhi wena ngokwakho uzoba ke kabi uma umngane wakho ngawe ukubuya "uyokunika" okuthile umoya ofanayo.
Noma kunjalo, abanye amaphethini eziyisisekelo, iyiphi ukukhuluma mayelana nentombazane, ngempela yini. Uma wenza kanjalo wonke amaphoyinti emalini ku pikaperskie indawo noma umagazini zabesilisa, ungathatha ingozi yokukhishwa inyumbazana nge lutho, ngoba awazi ukuthi ukuziphatha intokazi. Nje bathembekile futhi baqotho naye, futhi uma ungafuni yesibili ngemva kosuku lokuqala, kungcono ukumtshela ngencwadi ngqo, ube yindoda. Kungcono ukuba angakuvumela ukuba kube buhlungu manje, kodwa uzokuqonda ukuthi awukwazi ukumbona ngaphezulu, futhi abayofuna omunye umfana, hhayi Tesha ithemba kuwe. Uma ubona ukuthi ufuna le ntombazane futhi - ukuqaphela kwakhe kule, futhi uqhubeke nokuthuthukisa ubudlelwane.
Beka ukwamukela kwakho uthando umyalezo
U-Valentina Titova, umlingisi. Biography. Amabhayisikobho
Izipho for umshado odadewabo udade: yini ukukhetha? Ukuhluka izipho engavamile
Supply Division yendima yayo ekuqhubeleni inqubo ukukhiqizwa ibhizinisi
Yini Enterprise kangcono noma Professional Windows 10: Khetha uhlelo lokusebenza